Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0813 tal
Fa ny tany ho feno (Habakoka 2)
Talata 21 May
Ny valin-teny asetrin’Andriamanitra ny fanontanian’i Habakoka ao amin’ny toko 1:17, araka izay hita ao amin’ny toko 2, dia mitohy amin’ny endrika hira maneso ireo mpampijaly mpirehareha. Tsy latsaky ny dimy ny loza (Hab. 2:6, 9, 12, 15, 19) izay manantitrantitra ny hafatra hoe efa voaisy tombokase ny faharavan’i Babilônina. Ny famaizana ny fahavalo dia tena hifanaraka tsara amin’ilay fitsipika hoe “araka ny fatra nataonao no hamarana ho anao.”
Izay ataon’ny ratsy fanahy amin’ireo babony no hatao aminy koa amin’ny farany. Hijinja izay nafafiny izy, satria tsy afaka ny haneso an’Andriamanitra na oviana na oviana ny olombelona fatra-pirehareha. (Gal. 6:7).
Mifanohitra amin’izay hihatra amin’ny mpampijaly, izay hotsarain’Andriamanitra amin’ny farany, ny ho anjaran’ireo marina satria manana fanantenana ny fiainana mandrakizay ao amin’i Kristy izy ireo, na dia eo aza izay manjo azy ireo eto amin’ity fiainana ity. Rehefa milazalaza ny momba ny sisa mahatoky amin’ny andro farany ny bokin’ny Apôkalipsy dia mampiasa ilay teny hoe “ny faharetan’ny olona masina” (Apôk. 14:12) izy. Marina tokoa fa manam-paharetana ny marina eo am-piandrasany ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra, na dia amin’ny fiaviany fanindroany aza vao hahita izany izy ireo.
Vakio ny Hebreo 11:1–13. Ahoana no anampian’ireo andininy ireo antsika eo amin’ny tolona ataontsika amin’ireo fanontaniana izay nitoloman’i Habakoka ireo ihany, ao anatin’ny tontolon-kevitra misy antsika manokana?
Ny fanantintranterana ny fanatrehany tsy tapaka no valin-teny farany nomen’Andriamanitra ireo fanontanian’i Habakoka. Mitoky amin’ny fanatrehan’Andriamanitra sy mahazo antoka ny fitsarany na dia amin’ny fisehoan-javatra toa mifanohitra aza. Izany no hafatra ampitain’ny bokin’i Habakoka, izay hafatra ao amin’ny fanambarana ara-Baiboly rehetra. Ny finoana ara-paminaniana dia fitokisana amin’Andriamanitra sy amin’ny toetrany tsy miova.
“Ny finoana izay nanatanjaka an’i Habakoka mbamin’ireo olo-masina sy marina tamin’izany fotoana nisy fahoriana be izany, dia mbola manohana ny vahoakan’Andriamanitra koa ankehitriny. Mbola azon’ny Kristianina atao koa ny mibanjina an’Ilay Loharanon’ny fahazavana rehetra sy ny hery rehetra amin’ny ora manjombona indrindra sy amin’ny toe-javatra mampivarahontsana indrindra. Hohavaozina isan’andro isan’andro ny fanantenany sy ny herim-pony amin’ny alalan’ny finoany an’Andriamanitra.” — MM, t. 319.